I-Green World Eco Retreat - I-Airbnb
I-Green World Eco Retreat
I-Green World Eco retreat iyindawo yezazi zemvelo kanye nalabo abanentshisekelo yokuthola ukuqaphela kanye namaholide asekelwe emvelo esimeme.
Jabulela ukuthula nokuthula kwendawo ezungezile yehlathi noma ukubhucungwa okupholile esikhungweni semithi yemvelo.
Uzothola wena omusha, olindele ukuphinde unikezwe amandla, uphulukiswe, futhi ukhululwe!
Sinezimbali eziningi zasendle nezinyoni esingahlangana nazo, izindlela ezinde ezimazombezombe eziyimfihlo futhi. Itholakala ku-18Km entshonalanga yedolobha elinomlando laseToodyay.
Uyobingelelwa lapho ufika abasingathi bakho u-Yani noma uSandy abazokukhombisa indawo yokuhlala nezinsiza endaweni yabo esehlathini. Kubandakanya izindawo ze-BBQ ezicashile kanye nokuzizwisa komlilo wakusihlwa phakathi nesizini.
Unethuba, ngenkathi usendaweni, lezinhlobonhlobo zemihlangano yokufundisa nokuvakasha ngezindleko ezengeziwe; (ukheshi kuphela njengoba kungekho eftpos etholakalayo)
Zihlanganisa; i-permaculture - ukukhiqizwa kokudla okuphilayo, ukwakha okusimeme nemikhuba ehlobene, ukuvakasha kwezimbali zasendle ngesikhathi sonyaka, uhambo olusekelwe emvelweni oluqondisiwe olusekelwe ezintweni ozithakaselayo (izinyoni, izitshalo zomdabu). Kunesikhungo ozikhethela sona sokwelashwa kwemvelo esinikeza ukubhucungwa kwe-remedial noma okupholisayo, i-reflexology, ukuphulukiswa kwe-Reiki kanye nokuphulukiswa kwe-essence essence.
Kuyivelu eyingqayizivele yesipiliyoni seholide lemali emnyango we-Perth.
Itholakala ezintabeni eziqhele nge-18Km entshonalanga ukusuka edolobheni elihle lomlando lase-Toodyay, kuningi futhi ongakubona nokwenza ngaphandle kwendawo yethu njengoba i-Toodyay iyidolobha lomkhosi. Bona isikhungo sendawo sabavakashi noma iwebhusayithi yabo ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho, uma umninikhaya engekho okwesikhashana ungaxhumana no-Yani ngomakhalekhukhwini wakhe, ohlinzekwa njengengxenye yokubingelela kwakho kokuqala.
Uma udinga okuthile okwengeziwe sicela ubuze ababungazi.